Information - Myanmar Profess X
Changelog #2 - 19/11/2021
MPX ဆိုတာ . . . MPX ဆိုတာကတော့ အရှည်ကိုနည်းနည်း ပြန်ပြီး အဓိပ္ပါယ် ပြန်ဖွင့်ပေးရရင်တော့ M ဆိုတာ Myanmar ကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ P ဆိုတာကတော့ Profess ဆိုပြီး Professionalism ကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ X ကတော့ Project နာမည်ဖြစ်ပြီး များသောအားဖြင့် X ကတော့ Adult ကို ရည်ညွှန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက် X ကို ယူလိုက်တာပါ။
MPX မှာ ဘာတွေ တင်ကြလဲ? MPX မှာတော့ အဓိက အားဖြင့် 18+ Adult Content တွေကို တင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ Professionalism ကျကျ Watch ကျမယ် ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖြစ်ပြီး သတ်မှတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့အတူ တင်ကြ လုပ်ကြ ဆုံးဖြတ်ကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ 18+ နဲ့ပက်သက်တဲ့ Content တွေ Video တွေ Post တွေ Thread တွေအပြင် Pornstar တွေ Reality မကျမှုတွေ Fake Hub တွေ အကြောင်းအပြင် ရှားပါး Treasure တွေအကြောင်းကို ရတနာသိုက်ကြီးတစ်ခုလို ပုံဖော်ပြီး ထုဆစ်ကြမယ့် နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး။ 18+ ဆိုပေမယ့် အဆင့်အတန်းရှိရှိ သွားကြမှာဖြစ်ပြီး ရိုင်းပြတဲ့ Content သဘောမျိုး ဆဲရေးတာမျိုးတွေ မရှိအောင်တော့ အတတ်နိုင်ဆုံးလုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။
ဟာ 18+ Forum ဆို ဆဲလို့မရဘူးတဲ့လား? ဟုတ်ကဲ့ပါ။ 18+ ဆိုပေမယ့် ကျွန်တော်တို့က အရမ်းရိုင်လို့မရပါဘူး။ လူတိုင်းဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ဓမ္မတာဆိုပေမယ့် တွေ့တဲ့လူကို မုဒိန်းကျင့်လို့မရသလို နေရာတိုင်းမှာလဲ ရိုင်းနေလို့မဖြစ်တဲ့အတွက် ယဉ်ယဉ်းကျေးကျေးနဲ့ တစ်ဦးကို တစ်ဦးရိုင်းပင်တိုင်ပင်ပြီး ရှေ့ဆက်သွားကြဖို့တော့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်တွေ မတိမ်းပါးသွားအောင်လဲ စည်းကမ်းတွေ သတ်မှတ်ထားမှာဖြစ်ပြီး ရှေ့မှာ တားဆီးလာမယ့် ဘယ်အတားအဆီးကိုမဆို ပုစိန်တဲ့တူသော စည်းကမ်းချက်တွေနဲ့အတူ ခုတ်ထစ်ပြီး လမ်းသစ်တစ်ခုကို ဖောက်လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အရှည်ကို မျှော်ကိုးပြီး ဒီ Forum ကိုရေးသားပေးရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
MPX ရဲ့ အဓိက Main ကဘာလဲ? MPX ရဲ့ အဓိကကတော့ Adult Porn Forum ဖြစ်တဲ့အတွက် Porn နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ မည်သည့်အရာကိုမဆို လွတ်လပ်စွာတင်လို့ရမှာဖြစ်ပြီး။ တင်မယ့်သူတိုင်းအတွက်ကတော့ [lock] Something [/lock] ဆိုသည့် Credit System ကို အသုံးပြုပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဓိက အကြောင်းအရာကတော့ Forum မှာ Content တွေကို လွယ်လင့်တကူ ဝင်ရောက် ကြည့်သွားတာထက်စာရင် ဖိုရမ်မှာ Active ဖြစ်အောင်နေပြီးမှ Forum's Forums တွေမှာ ဝင်ရောက်ပြီး ဖြေဆိုပေးမှ ရလာမယ့် Credits လေးတွေနဲ့ ဝယ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်လုပ်မှ ကိုယ်လိုချင်တာ ဝယ်လို့ရအောင်လုပ်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Forum မှာပါတဲ့ Categories တွေက ဘာတွေလဲ? Home ထဲမှာရှိတဲ့ Announcements, News & Information ဆိုတာတွေကတော့ Forum နဲ့ပက်သက်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို ထုတ်ဖော်ကြော်ငြာသွားမယ့် နေရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့်တော့ အဆိုပါ နေရာတွေကို Administrator တွေနဲ့ Moderator တွေကပဲ တင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Feedback & Suggestions ဆိုတာကတော့ Forum ကို ဘယ်လို Improve ဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်မလဲဆိုတာနဲ့ ပက်သက်ပြီး အကြံဉာဏ်တွေ ပေးသွားနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Site Updates & Changes နေရာမှာတော့ Forum ရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော Web Master (အယ်လဲ့ ရာထူးကြီး ထည့်ပေးလိုက်တာ 😃 ) က Site နဲ့ပက်သက်တဲ့ Update တွေ ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားသလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို နေ့စွဲနဲ့တစ်ကွ ပြန်လည်ဖြေရှင်းပေးသွားမယ့် နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ News မှာကတော့ Donation အကြောင်းအရာတွေ သတင်းတွေ လုပ်ဆောင်ချက် လှူဒါန်းချက် အစရှိသဖြင့် သတင်းတွေကို ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Member of The Month ဆိုတာကတော့ တစ်လအတွင်းမှာ Forum Active ဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အကောင်းဆုံး Member တွေကို ဆုချီးမြင့်မယ့် နေရာလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Archive ကတော့ အဟောင်းတွေကို စုစည်းမယ့် တစ်နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ General Discussions မှာကတော့ အထွေထွေ Forum ကို Active ဖြစ်အောင်အတွက် Fun နေရာလေးတစ်ခုကို လုပ်ဆောင်ပေးသွားမယ့်နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါနေရာမှာတော့ 18+ နှင့်မသက်ဆိုင်သော (သက်ဆိုင်နိုင်သော) နေရာလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပြီးတော့ အဆိုပါနေရာမှာ Credits ရှာဖွေလို့အကောင်းဆုံး Mining နေရာလေးတစ်ခုအဖြစ် ဖန်တီးပေးထားတာပြဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါနေရာမှာပဲ TV Program အကြောင်းတွေ ဇာတ်ကားအကြောင်းတွေ သီချင်းအကြောင်းတွေ အစရှိသဖြင့် မေးလိုရာမေး ဖြေလိုရာဖြေ လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် နေရာ ကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပြီး Paradise တစ်ခုအဖြစ် ဖန်တီးပေးထားပါတယ်။ Paradise လေးကိုတော့ You'll know that Later လို့ပဲ ပြောချင်ပါရဲ့ 😉 Country ဆိုတဲ့ Forum လေးမှာတော့ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတွေရဲ့ ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ Video တွေ Photo တွေကို တင်နိုင်မယ့် နေရာလေးပါ အဓိကကတော့ Chinese ဆိုရင်လဲ မော်ဒယ်လေးတွေရှိသလို Thailand ဆိုရင်လဲ တော်တော် Cute ဖြစ်တဲ့ prostitute လေးတွေရှိတဲ့အတွက် ဒေသထွက်ကုန်လေးတွေကို တင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Channel မှာကတော့ Porn Website တော်တော်များများမှာ Watched List များလွန်းတဲ့ Channel တွေကို ထည့်သွင်းပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Collection သဘောမျိုးပေါ့။ Pornographic မှာကတော့ Porn နှင့် သက်ဆိုင်တဲ့ Human တွေအကြောင်းမဟုတ်တဲ့အရာမျိုးတွေ ဥပမာ Hentai လိုမျိုး Human နှင့်သက်ဆိုင်တဲ့ Pornographic ဆန်သော ဓါတ်ပုံတွေ Premium Photo တွေကို တင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပြီး BDSM အတွက်ကိုလဲ သီးသန့် တစ်ခုသက်သက်ခွဲပေးထားပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ အခြားသော Category လေးတွေကိုလဲ ထပ်ထပ် ထည့်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Reading အတွက်ကတော့ Comic တွေ Ebooks တွေ Manga တွေ Novel တွေအကြောင်းကို ဖတ်နိုင်ဖို့အတွက် နေရာလေးတစ်ခုပါ။ (စာများများဖတ်ပါဆိုတာ အလကားပြောတာမဟုတ်ပါဘူး ဟီးဟီး)။ Parties & Events ဆိုတာကတော့ Sexy and I know it ဆိုတာတွေကို အဓိကတွေ့လို့ရအောင်လို့ ပေးသွားမယ့် အရာပဲဖြစ်ပြီး အခုအစပိုင်းမှာတော့ ပါဝင်နိုင်အုံးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပါဝင်နိုင်အုံးမှာ မဟုတ်တဲ့အပြင် VIP or VVIP တွေကိုစုပြီး Organize လုပ်ပေးမယ့် အစီအစဉ်လေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Party တွေကို မတက်နိုင်တဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ Party Memories တွေကို ပြန်တင်ပေးသွားနိုင်အောင်တော့ လုပ်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Mask Party ဘာပါတီ ညာပါတီ အစရှိသဖြင့်ပေါ့။ Market Place ဆိုတာကတော့ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားတို့အတွက် နေရာကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်အောင် လုပ်ပေးသွားမယ့် နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Adult Toy တွေအပြင် အထောက်အထားကောင်းမွန်တဲ့ ဆေးဝါးတွေကို တင်သွင်းခွင့်ပြုသွားမယ့်နေရာလေးပဲဖြစ်ပြီး Forum Active ဖြစ်တာနဲ့ စတင်သွားမယ့် Forum လေးဖြစ်ပါတယ်။ Seller တွေအတွက်နဲ့ Buyer တွေအတွက် Privacy အတွက်ကိုတော့ နောက်ပိုင်းမှာ ပြန်လည်စဉ်းစားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ V.I.P ဆိုတာကတော့ ရှာမှ ရှားတဲ့ Content တွေကို တင်သွားမှာဖြစ်ပြီး လူ ပိုသန့်မယ့် နေရာတစ်ခုဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ What The Fuck is "High as Fuck!"? ဒီနေရာမှာ မေးစရာရှိလာတာကတော့ High as Fuck! ဆိုတာနဲ့ အားလုံးသိမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာကတော့ High Staff ဖြစ်တဲ့ Medical Marijuana အကြောင်းကို Growing, Knowledge, Conditions တွေအပြင် အခြားသော အရာတွေကို မေးမြန်နိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးသွားမယ့် နေရာတစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အရောင်းအဝယ်ကိုတော့ ဒီနိုင်ငံမှာ တရားဝင် ခွင့်ပြုသွားရင် ထည့်သွင်းဖို့ အစီအစဉ်ရှိပေမယ့် မရှိသေးတဲ့အချိန်မှာတော့ Marijuana Movements အနေနဲ့သာ လုပ်ဆောင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ( အဲ့ဒီအတွက်တော့ အကျယ် မစဉ်းစား Plan မချရသေးတဲ့အတွက်တော့ ရှင်းပြဖို့တော့ ခက်ခဲပါသေးတယ်) ဒါအပြင်တော့ LSD အကြောင်းကို နိုင်ငံခြားကလူတွေ အသုံးပြုတဲ့ mushrooms အကြောင်းတွေ တင်ဖို့လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး သုံးစွဲအောင် မြှူတဲ့လူတွေကို Ban သွားမှာဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီလို ဖြစ်မယ့် ဟာကို Imagination ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးယဉ် နိုင်ငံတော်ကြီး တည်ထောင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ ထည့်သင့်သလို ထည့်သွင်းသွားမှာပဲဖြစ်ပြီး ဒီနေရာမှာတော့ Forums တွေအကြောင်းကို ရပ်နားသွားပါ့မယ်။
MPX Related Plan? MPX ရဲ့ အများ မမျှော်လင့်ထားတဲ့ Plan တစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ Forum မှ ရရှိလာတဲ့ ဝင်ငွေတွေနဲ့ မရှိတဲ့နေရာတွေမှာ လှူဒါန်းသွားမှာဖြစ်ပြီး အလျင်သင့်သလို ဆေးရုံးတွေမှာ လူနာတွေနဲ့ လိုအပ်နေသော ဆေးရုံတွေမှာ လူကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Payment Gateway တွေကနေ တစ်ဆင့် လှူဒါန်းသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ စုပေါင်းပြီးလှူဒါန်းပြီး လှူဒါန်းမှာဖြစ်သလို MPX ဆိုတဲ့ နာမည်ကို ကိုယ်စားပြုပြီး အများကောင်းမှု အလှူဒါနလေးတစ်ကိုလဲ ထည့်သွင်းသွားမယ့် အစီအစဉ်လေးကတော့ အများမမျှော်လင့်ထားတဲ့ Surprise လေးတစ်ခုလို့တောင် ဆိုလို့ရတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်လေးကို လုပ်ဆောင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Release Launch? Website ကိုတော့ Launch လုပ်ဖို့အတွက်ကတော့ Pron Website တွေအကုန်လုံးကို Social Network အဖြစ်အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် launch လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ အားလုံးဟာ Rule တွေ Terms တွေနဲ့ပဲ ရှေ့ဆက်ကြရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Launching ကိုတော့ ဒီလာမယ့် လနှောင်းပိုင်းအတွင်း ရအောင်လုပ်ဆောင်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
For You from Night_Krawler!
~| #MPX #MyanmarProfessX #AdultForum #ProjectX #X |~
Current time: 01-21-2022, 12:04 AM